* Isticmaalka khamriga
* Iftiinka cadceedda oo si badan kugu dhaca
* Dhaawac isha gaara
* Arag caad saaran yahay ama isku darsan
* Waxa la arkaa iftiin ku wareegsan laydhka ama nalalka
* Aragga habeenkii oo xun
* Aragga oo ah laba-laba
* Midabada oo aad moodid kuwa khafiifay
* Haddii aad jirtid 60 ama aad ka weyntahay, ha laguu sameeyo baadhitaan indho oo leh weyneyn ugu yaraan hal mar labadii sannadooba.
* Cun cagaar badan, khudaar iyo cuntooyin kale oo badan oo leh ‘antioxidant’ sida kuwa ku badan vitamin E-ga.
* Gasho muraayadaha qoraxda iyo koofiyad si aad isaga ilaalisid iftiinka qorraxda ee ah ‘ultraviolet’.
* Maamul sonkorta/sonkorowga aad qabtid adiga oo la kaashanaya dhakhtarkaaga iyo nafaqo-yaqaan.
* Iska jooji sigaar-cabista.
* Iska jooji khamriga.Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan qoraalkaan, halkaan ku waydii.